Shuruudaha iyo Shuruudda Milyan Sameeyayaasha | Shuruudaha isticmaalka - Milyan Sameeyayaal
Shuruudaha iyo Shuruudda Milyan Sameeyayaasha | Shuruudaha isticmaalka
Fadlan ka hoos hel shuruudaha iyo xaaladaha Milyan Sameeyayaashii ugu dambeeyay ("Shuruudaha isticmaalka").
Fadlan si taxadar leh u akhri Shuruudahaan. Helitaanka, iyo adeegsiga alaabada Milyan Sameeyayaasha ("Wax soo saarka"), Adeegyada Milyan Sameeyayaasha ("Adeegyada"), iyo Websaytka Million Makers https://MillionMakers.com/ ("Website") ama subdomain (yada) kasta, oo ay ku jiraan mid ka mid ah waxa ku jira, ayaa shuruud u ah heshiiskaaga Shuruudahaan. Waa inaad aqriso, ogolaato, oo aad aqbasho dhammaan shuruudaha iyo shuruudaha ku jira Shuruudahaan. Adiga oo abuuraya xisaab, ama adoo isticmaalaya ama booqanaya boggayaga internetka ama alaabooyinka ama adeegyada, waxaad ku xiran tahay Shuruudahaan waxaadna muujineysaa inaad sii wadato aqbalaadda Shuruudahaan.
Akoonkaaga Milyan Sameeyayaasha ah
Haddii aad koonto ka sameysato Websaydhka, adigaa mas'uul ka ah ilaalinta amniga koontadaada, adiguna waxaad si buuxda masuul uga tahay dhammaan howlaha ka dhaca koontada iyo tallaabooyinka kale ee la qaado ee la xiriira koontada. Waxaad ogolaatay inaad bixiso oo aad xafiddo macluumaad sax ah, hada jira oo dhameystiran, oo ay ku jiraan macluumaadka xiriirkaaga ee ogeysiisyada iyo isgaarsiinta kale ee naga iyo macluumaadkaaga lacag bixinta. Uma adeegsan kartid macluumaad been ah ama marin habaabin ah oo la xiriirta koontadaada, ama ka ganacsiga magaca ama sumcadda dadka kale, Milyan Sameeyayaashuna waxay beddeli karaan ama ka saari karaan wixii macluumaad ah ee ay u aragto mid aan habboonayn ama aan sharci ahayn, ama haddii kale ay u badan tahay inay u soo bandhigto Million Makers sheegashada dhinacyada saddexaad. Waxaad ogolaatay in aan qaadi karno talaabooyin si loo xaqiijiyo saxnaanta macluumaadka aad na siisay.
Adiga ayaa mas'uul ka ah qaadista tillaabooyin macquul ah si aad u ilaaliso sirta magacaaga iyo isgarad-sirtaada. Waa inaad isla markiiba ogeysiisaa Milyan Sameeyayaasha wixii adeegsi aan idman ahayn ee macluumaadkaaga, koontadaada ama wixii kale ee nabadgelyo xumo ah. Milyan Sameeyayaashu mas'uul kama noqon doonaan wixii ficillo ah ama aad dhaafto, adiguna, oo ay ku jiraan waxyeello noocee ah oo noocee ah oo ku timaadda falalkaas ama ka gaabintaas.
Waajibaadka Isticmaalayaasha Milyaneerada sameeya, Alaabada, iyo / ama Adeegyada
Helitaankaaga "MillionMakers.com", iyo dhammaan isticmaalkaaga Websaydhka, Alaabada, iyo / ama Adeegyadu waa inay noqdaan kuwo sharci ah oo ay tahay inay u hoggaansamaan dhammaan Shuruudaha, iyo wixii kale ee heshiis ah ee u dhexeeya adiga iyo Milyan Sameeyayaasha iyo / ama MM Solutions INC iyo / ama Milyan Sameeyayaal LLC iyo / ama MM LLC iyo / ama Million Sameeyayaal Xalal INC iyo / ama MM LTD. iyo / ama Milyan Sameeyayaal LTD.
Markaad marinayso ama isticmaalayso Websaytka “MillionMakers.com”, Wax soo saarka, iyo / ama Adeegyada, waa inaad u dhaqanto si shacbi iyo ixtiraam leh markasta. Waxaan si gaar ah u mamnuucaynaa isticmaalka bogga, Badeecadaha, iyo / ama Adeegyada, waadna oggolaatay inaadan isticmaalin Websaydhka, mid ka mid ah kuwan soo socda:
Ku lug lahaanshaha anshaxeed ka dhignaan doona dambi ciqaabeed, taasoo keeneysa mas'uuliyadda madaniga ah ama haddii kale ku xadgudubto magaalo, gobol, sharci qaran ama sharci caalami ah ama qawaaniin ka hor imaaneysa u hoggaansamida borotokoolka la aqbalay.
Isgaadhsiinta, gudbinta, ama dhajinta alaabada ay leedahay xuquuqda daabacaadda ama haddii kale ay leedahay dhinac saddexaad mooyaane adigu haddii aad tahay mulkiilaha xuquuqda daabacaadda ama aad fasax ka haysato milkiilaha inaad ku dhejiso.
Xiriirinta, gudbinta, ama dhajinta alaabada muujineysa sirta ganacsiga, illaa aad adigu leedahay ama aad ogolaansho ka hesho milkiilaha mooyee.
Isgaadhsiinta, gudbinta, ama dhajinta alaabta ku xadgudbeysa hanti kasta oo aqooneed, asturnaan ama xayeysiin mid kale.
Isku dayga inaad faragalin ku sameyso si kasta oo aad u leedahay Website-ka, ama shabakadahayaga ama amniga shabakada, ama isku dayga inaad isticmaasho Boggeena internetka si aad ugu hesho marin aan sharciyeysneyn nidaamka kombiyuutar kale.
Helitaanka xogta aan adiga loogu talagalin, ama aad gasho server ama koonto, oo aadan awood u lahayn inaad gasho.
Isku dayga baaritaanka, iskaanka ama tijaabinta u nuglaanta nidaamka ama shabakada ama jebinta amniga ama talaabooyinka xaqiijinta iyadoon la siinin ogolaansho sax ah (ama ku guuleysiga isku dayga noocaas ah)
Isku dayga faragalinta ama faragalinta hawlgalka Websaydhka, Wax soo saarka, iyo / ama Adeegyada, ama u fidinta adeegyadeena isticmaaleyaasha kale ee Websaydhka, bixiyahayaga martigelinaya ama shabakadeena, oo ay ku jiraan, iyada oo aan xad lahayn, iyada oo loo marayo gudbinta fayras Websaydhada, rar xad dhaaf ah, "daadad", "qarxinta waraaqaha" ama "burburinta" Websaydhka.
Intaa waxaa dheer, haddii aad ku shaqeyso koonto, gacan ka geysato koonto, ku dhajiso sheyga bogga, ku dhejiso xiriiriyeyaasha bogga, ama haddii kale u samee waxyaabo lagu heli karo iyada oo loo marayo Websaydhka (wax kasta oo noocaas ah, "Mawduuc"), adigaa mas'uul ka ah wixii ku saabsan, iyo wixii waxyeelo iyo waxyeelo ah ee ka dhasha Mawduucaas. Taasi waa kiiska iyadoon loo eegin haddii Mawduuca laga hadlayo uu ka kooban yahay qoraal, muuqaallo, feyl maqal ah, ama softiweer kombiyuutar ah. Adoo ka dhigaya waxyaabaha la heli karo, waxaad wakiil ka tahay oo aad dammaanad qaadaysaa in:
soo degsashada, nuqul ka sameynta iyo adeegsiga nuxurka ma jabineyso xuquuqda lahaanshaha, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidneyn xuquuqda daabacaadda, patentka, astaanta ganacsiga ama xuquuqda sirta ganacsiga, ee dhinac saddexaad kasta.
haddii loo-shaqeeyahaagu xaq u leeyahay hantida aqooneed ee aad abuurto, midkoodna (i) waxaad ka heshay oggolaansho qoraal ah loo-shaqeeyahaaga si aad u soo dirto ama u soo bandhigto Mawduuca, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn barnaamij kasta oo software ah, ama (ii) uga-shaqeeyahaaga ka-dhaafitaan qoraal ah dhammaan xuquuqda ku jirta ama ku jirta Mawduuca.
waxaad si buuxda u fulisay rukhsad kasta oo dhinac saddexaad ah oo laxiriira Mawduuca, waxaadna sameysay dhammaan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah si guul leh looga gudbo si loo dhammeeyo adeegsadayaasha wixii shuruudo ah ee loo baahan yahay.
Mawduuca kuma jiraan ama rakibin wax fayrasyo ​​ah, dixirigoodu, malware, fardaha Trojan ama waxyaabo kale oo waxyeello leh ama wax duminaya.
Mawduucu maahan spam, kumana jiraan waxyaabo ganacsi anshax xumo ah ama aan loo baahnayn oo loogu talagalay in loogu kaxeeyo taraafikada goobaha saddexaad ama kor loogu qaado qiimeynta mashiinka raadinta ee goobaha saddexaad, ama in lagu sii wado falal anshax xumo ama sharci darro ah (sida phishing) ama marin habaabinta ilaa meesha ay ka timaaddo maaddada (sida is-buufinta).
Mawduucu ma aha fisqi, nacayb, nacayb ama midab ama qowmiyad diidmo, mana ku xadgudbayo asturnaanta iyo xayeysiinta xuquuqda dhinac saddexaad.
Haddii aad tirtirto Mawduuca, Milyan Sameeyayaashu waxay isticmaali doonaan dadaal macquul ah si ay uga saaraan Websaydhka iyo adeegeyaasheena, laakiin waxaad qiraysaa in qafis ama tixraacyada Mawduuca laga yaabo inaanay isla markiiba ka helin dadweynaha.
Adiga ayaa mas'uul ka ah qaadashada taxaddarrada sida lagama maarmaanka u ah si aad naftaada iyo nidaamyada kombiyuutarkaaga uga ilaaliso fayrasyada, dirxiga, fardaha Trojan, iyo waxyaabaha kale ee waxyeellada leh ama wax u dhimaya. Milyan Sameeyayaashu waa inay qaadaan taxaddar macquul ah si ay uga hortagaan gudbinta waxyaabaha halista ah ee ka imanaya nidaamyadeeda teknolojiyadeed ee nidaamkaaga tiknoolajiyadeed.
Milyan Sameeyayaashu waxay iska fogeynayaan wax mas'uuliyad ah wixii waxyeelo ama waxyeelo ah ee ka dhasha marin-u-helkaaga ama isticmaalka Websaydhka, Alaabada, iyo / ama Adeegyada, ama marin u helka ama adeegsiga degellada aan ahayn Milyan-sameeyeyaasha.
Milyan Sameeyayaashu waxay xaq u leeyihiin (in kasta oo aanu ahayn waajibku) inay (i) diidaan ama ka saaraan wixii Mawduuc ah, ee kooxda Million Makers fikrad macquul ah, ku xad gudubta wax kasta oo Milyan Sameeyayaal ah ama si kasta oo waxyeello u leh ama aan loo diidi karin, ama (ii) joojiso ama diiddo marin u helka iyo adeegsiga Websaydhka, Alaabada, iyo / ama Adeegyada, qof kasta sabab kasta ha noqotee, ikhtiyaar u gaar ah Milyan Sameeyayaal.
Isticmaalka Mawduuca Saddexaad, Sooftiweerka, Codsiga, Adeegyada iyo Qalabka
Milyan Sameeyayaashu dib uma eegin, dibna uma eegi karaan, dhammaan waxyaabaha, oo ay ku jiraan softiweerka kumbuyuutarka, ee lagu dhejiyay Websaydhka, sidaa darteedna mas'uul kama noqon karaan waxyaabahaas, isticmaalkiisa ama saamayntiisa. Iyagoo ku shaqeynaya Websaydhka, Milyan Sameeyayaashu ma matalaan ama macnaheedu maaha inay taageerto maaddada halkaas ku dhajisan, ama ay rumaysan tahay in waxyaabahaas oo kale ay sax yihiin, waxtar leeyihiin ama aan waxyeello lahayn. Websaydhku wuxuu ka koobnaan karaa waxyaabo xadgudub ah, anshax xumo ah, ama haddii kale la diidi karo, iyo sidoo kale waxyaabo ay ku jiraan khaladaad farsamo, khaladaad qoraal, iyo khaladaad kale. Websaydhku wuxuu sidoo kale ku jiri karaa waxyaabo ku xadgudbaya asturnaanta ama xuquuqda xayeysiinta, ama ku xadgudbaya hantida aqooneed iyo xuquuqda kale ee lahaanshaha, ee dhinacyada saddexaad, ama soo dejinta, nuqul ama adeegsiga taas oo ku xiran shuruudo iyo shuruudo dheeraad ah, la sheegay ama aan la sheegin. Milyan Sameeyayaashu waxay iska fogeynayaan mas'uuliyad kasta oo waxyeelo iyo / ama waxyeelo ka dhalata adeegsiga ama soo degsashada dhajinta dhinacyada kale ee websaydhka.
Mawduuca lagu dhejiyay degellada kale
Dib uma aanan eegin, dibna uma eegi karno, dhammaan waxyaabaha, oo ay ku jiraan softiweerka kumbuyuutarka, oo lagu diyaariyey websaydhyada iyo bogagga ay ku xiran tahay MillionMakers.com, iyo isku xirka MillionMakers.com. Million Makers wax awood ah kuma lahan kuwa aan Million Makers ka ahayn websaydhada iyo bogagga isla markaana mas'uul kama aha waxyaabaha ku jira ama isticmaalkooda. Adoo ku xiraya degel aan Milyan-sameeye ahayn ama degel, Million Makers ma matasho ama macnaheedu wuxuu yahay inay ansaxineyso degel ama boggaas.
Ku xadgudubka xuquuqda maqalka
Maaddaama Milyan Sameeyayaashu ay dadka kale uga baahan yihiin inay ixtiraamaan xuquuqdooda aqooneed ee aqooneed, waxay ixtiraamtaa xuquuqda aqooneed ee dadka kale. Haddii aad rumeysan tahay in waxyaabaha ku yaal ama ku xiran websaydhka ay ku xadgudbayaan xuquuqdaada, waxaa lagugu dhiirigelinayaa inaad ku wargeliso Milyan Sameeyayaasha info@millionmakers.com. Milyan Sameeyayaasha ayaa, sida ay awooddo, uga jawaabi doonta dhammaan ogaysiisyada noocaas ah, oo ay ku jiraan kuwa loo baahan yahay ama ku habboon iyaga oo ka qaadaya waxyaabaha ku xadgudbaya ama curyaaminaya dhammaan xiriidhada waxyaabaha ku xadgudba. Si aad noogu soo dajiso waxyaabaha ku xadgudbaya, fadlan noo soo dir, waa inaad siisaa Wakiilkayaga DMCA macluumaadka soo socda:
(a) saxiixa elektarooniga ah ama jireed ee qofka loo idmaday inuu matalo milkiilaha shaqada xuquuqda lahaanshaha;
(b) aqoonsiga shaqada xuquuqda lahaanshaha iyo goobta ku taal Websaydhka shaqada la sheegay in lagu xad gudbay;
(c) bayaan qoraal ah oo aad ku kalsoontahay inaad aamin santahay in isticmaalka lagu muransan yahay uusan fasax ka helin milkiilaha, wakiilkiisa ama sharciga;
(d) magacaaga iyo macluumaadkaaga xiriirka, oo ay ku jiraan lambarka taleefanka iyo cinwaanka iimaylka; iyo
(e) bayaan aad adigu ku sheegtay in macluumaadka kor ku xusan ee ogeysiiskaagu yahay mid sax ah oo, ciqaabta been abuurka ah, inaad adigu tahay mulkiilaha xuquuqda daabacaadda ama laguu oggolaaday inaad ku shaqeyso magaca mulkiilaha xuquuqda daabacaada.
Macluumaadka xiriirka ee Wakiilkayaga DMCA ee ogaysiiska sheegashada xadgudubka xuquuqda lahaanshaha Mareykanka waa: MM Solutions Inc., emayl: info@millionmakers.com.
Marka laga hadlayo adeegsade ku xadgudbi kara ama si isdaba joog ah ugu xadgudbaya xuquuqda daabacaadda ama xuquuqda kale ee hantida aqooneed ee Milyan Sameeyayaasha ama kuwa kale, Milyan Sameeyayaasha ayaa, ikhtiyaar ahaan, joojin kara ama u diidi kara helitaanka iyo isticmaalka Websaydhka, Alaabada, iyo / ama Adeegyada. Marka laga hadlayo joojinta noocan oo kale ah, Milyan Sameeyayaashu waajib kuma lahaan doonaan inay soo celiyaan wixii lacag ah ee horey loogu siiyay Million Makers qof kasta oo ixtiraam u ah joojintaas oo kale.
Milyan Sameeyayaal, Astaanta Milyan Sameeyeyaasha, iyo dhammaan calaamadaha ganacsiga, calaamadaha adeegga, sawirada iyo astaamaha loo istcimaalo Xiriirka Websaydhada, Alaabada, iyo Adeegyada, waa calaamadaha ganacsiga ama calaamadaha ganacsiga ee ka diiwaangashan Milyan Sameeyayaasha ama shatiyeyaasha Milyan Sameeyayaasha. Astaamo kale, calaamado adeeg, jaantusyo iyo astaamo loo adeegsado websaydhka, Badeecadaha, iyo Adeegyada, waxay noqon karaan calaamadaha ganacsiga ee dhinacyada kale ee kale haddii ay sidaas tahay liisanka noocan ahi waa faa iidada gaarka ah iyo isticmaalka annaga mooyee haddii kale si kale loo sheegay, ama hantida milkiilayaashooda. Isticmaalkaaga Websaydhku wax xuquuq ah ama rukhsad ah kuma siinayo inaad ku soo saarto ama aad si kale u isticmaasho wax Milyan Sameeyayaal ah ama calaamado ganacsi oo saddexaad ah. Sidoo kale, ma siineysid wax xaquuq ah ama ruqsad ah si aad u soo saarto ama aad u isticmaasho mid ka mid ah calaamadaha ganacsigaaga, calaamadahaaga adeegga, sawirada iyo / ama astaamaha, illaa aad si cad u oggolaato mooyee.
Isbedelada ku jira waxyaabaha, wax soo saarka iyo adeegyada
Qaabeynta iyo qeexida websaydhka, oo ay kujirto iyada oo aan xadidnayn dhamaan waxyaalaha laga heli karo halkaas, Badeecadaha, iyo Adeegyada waa la beddeli karaa iyo / ama la cusbooneysiin karaa marba marka ka dambeysa, iyadoo la oggol yahay milkiilaha sameeya oo keliya. Waad ku xidhan tahay wixii isbeddelo ah ama cusbooneysiin ah, illaa mooyee isbeddelada noocan ahi ay yareeyaan waxqabadka iyo qiimaha Websaydhka, Alaabada iyo / ama Adeegyada.
Xaddidaadda damaanadaha Milyan sameeyeyaasha, Alaab-qeybiyeyaasheeda iyo shatiyeyaasheeda
Milyan sameeyeyaashu waxay u dammaanad qaadaysaa macaamiisha Million Makers ee alaabada iyo / ama adeegyada la bixiyay, iyadoo la bixinayo in macaamiisha noocan oo kale ah ay bixiyeen dhammaan khidmadaha laga rabo, isla markaana aysan si kale u burinaynin waajibaadka saaran Million Makers, helitaanka Alaabta iyo / ama Adeegyada ("Waqtiga shaqada") boqolkiiba sagaashan iyo sideed (98%) bishii. Haddii sabab kaliya oo loo tiirinayo Milyan Sameeyayaasha waqtiga waqtigiisa aan la buuxin, Milyan Sameeyayaasha kuma qasbana inay bixiyaan nooc kasta oo ah "waxyeelo dareere ah", Badeecooyinka iyo / ama Adeegyadu ma ahan kuwo la heli karo oo ku xadgudbaya waqtiga shaqada. Waad oggoshahay inay adkaan doonto in la go'aamiyo inta waxyeelo ah ee ku soo gaari doonta haddii waqtiga la qabanayo aan la dabooli doonin Waxaad sidoo kale ogolaatay in jadwalka magdhow ee kor ku xusan uusan ka dhalan doonin nooc kasta oo waxyeelo dareere ah oo keenaya nooc kasta oo suurtagal ah lumis iyo qadarka khasaarahaaga dhabta ah. Si kastaba ha noqotee, haddii Badeecadaha iyo / ama Adeegyadu aysan kuu bannaanayn sabab keliya oo loo aanayn karo Million Makers muddo sii socota oo shan (5) maalmood ah ama ka badan, waxaad ku joojin kartaa heshiiskaaga qoraal si dhaqso leh, waadna codsan kartaa soo celinta khidmadaha aad bixisay ee laxiriira Alaabada iyo / ama Adeegyada aan la heli karin, pro-rata muddada harsan ee heshiiskaaga aan la adeegsan.
Milyan Sameeyayaasha iyo shati siiyayaashoodu wax damaanad qaad ah ama wakiilo ah kama sameeyaan shabakadda, Badeecadaha, iyo Adeegyada, ama degel kasta oo xiriir la leh ama waxyaabaha ay ka kooban tahay, oo ay ku jiraan nuxurka, macluumaadka iyo agabka ku yaal ama saxnaanta, dhammaystirka, ama waqtiga ku habboon mawduuca , macluumaad iyo qalab. Waxaan sidoo kale dammaanad ka qaadaynin ama aan ka wakiil ahayn marin u helkaaga ama adeegsiga Websaydhka, Alaabada, iyo / ama Adeegyada, ama goob kasta oo xiriir la leh aan kala go 'lahayn ama ka madax bannaanayn khaladaad ama dhaafitaan, ciladahaas la sixi doono, ama in Websaydhada, Alaabada , iyo / ama Adeegyada, ama degel kasta oo xiriir la leh waa ka xor fayrasyada kombiyuutarka ama waxyaabo kale oo waxyeelo leh. Waxaan qaadaneynaa wax masuuliyad ah, mana masuul ka noqon doono wixii waxyeelo ah, ama fayrasyada laga yaabo inay ku dhacaan, qalabka kombuyuutarkaaga ama hantida kale sababo la xiriira isticmaalka alaabta ama Adeegyada, ama marin u helkaaga, isticmaalka, ama daalacashada Websaydh, ama soo degsashadaada ama soo dejinta wax kasta oo ka mid ah bogga ama bogga. Haddii aadan ku qanacsaneyn Websaydhada, waxa keliya ee kuu furan waa inaad joojiso isticmaalka Websaydhka.
Talo bixin, natiijooyin ama macluumaad, ha ahaato mid af ama qoraal ah, oo aad ka heshay Milyan Sameeyayaasha, ama websaydhka, ma abuuri doonto wax damaanad ah oo aan si cad loogu samayn halkan. Milyan Sameeyayaashu daruuri kama aha inay taageeraan, taageeraan, cunaqabateeyaan, dhiirigeliyaan ama ku raacaan wax kasta oo ka mid ah ama waxyaabaha ku jira isticmaale kasta, ama ra'yi kasta, talo bixin, nuxur, xiriir, xog ama talo lagu muujiyey ama lagu muujiyey dhexdeeda, iyo Milyan Sameeyayaashu waxay si cad u diidayaan wax kasta iyo dhammaan mas'uuliyadda ku xirnaanta waxyaabaha isticmaalaha iyo wixii kale ee ka kooban, agabyada ama macluumaadka laga heli karo ama loo maro Websaydhka, Alaabada, iyo / ama Adeegyada, oo ay abuureen ama bixiyeen isticmaaleyaasha ama dhinacyada kale ee saddexaad.
Fadlan ogow in awoodaha qaarkood aysan oggolaan karin ka-reebitaannada dammaanad-qaadasho, marka qaar ka-reebitaannada kor ku xusan qaarkood kuma khuseeyaan adiga. Ka hubi sharciyadaada maxalliga ah wixii xaddidaad ama xaddidaad ah ee la xiriira ka-reebitaannada dammaanadaha.
Xaddidaadda Mas'uuliyadda Milyanleyaasha sameeya, alaab-qeybiyeyaasheeda iyo shatiyeyaasheeda
Duruufo jira awgood xisbi, faracyadiisa iyo la-hawlgalayaasheeda, agaasimayaashooda, saraakiishooda, shaqaalahooda ama wakiilladooda, iyo wakiillada kale, mas'uul kama aha waxyeello aan toos ahayn, natiijo ahaan, dhacdooyin, gaar ah, ama ciqaab ciqaabeed ah, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn faa'iidada lumay iyo carqaladeynta ganacsiga, ha ahaato qandaraas ama jirdil, oo ay ka mid tahay dayacaad, ka timaadda qaab kasta oo loo adeegsado Websaydhka, Alaabada, Adeegyada, iyo / ama Mawduucyadeeda, ama degel kasta oo xiriir la leh xitaa haddii noocaas oo kale si cad loogula taliyo suurtagalnimada waxyeelada noocan oo kale ah. Marka laga reebo magdhowyada laxiriira ku xadgudubka sharciga ah ee la aqoonsan yahay ama la qiray ee ay keeneen Alaabada iyo / ama Adeegyada ay soo gudbiyeen dhinac ka mid ah iyada oo aan laga helin wax sedexaad ah qeyb ka mid ah, si kasta oo ay ahaataba masuuliyadda koox ka badaneyso wadarta guud ee ay ka heleen Million Makers inta lagu guda jiro laba iyo tobanka (12) bilood ee isla markiiba ka hor taariikhda markii ugu horreysay ee waxyeellada dhacday.
Wakiiladaada iyo Dammaanadahaaga
Waad matalaysaa oo aad dammaanad qaadaysaa in isticmaalkaaga Websaydhka, Alaabada, iyo / ama Adeegyadu ay noqon doonaan kuwo waafaqsan heshiis kasta oo dhexmara adiga iyo Milyan Sameeyayaasha, Milyanlayaasha sameeya Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah, Shuruudahaan, iyo sharciyo iyo qawaaniin kasta oo lagu dabaqi karo, oo ay kujirto xad la'aan sharciyada iyo qawaaniinta maxalliga ah ee dalkaaga, gobolkaaga, magaaladaada, ama aagagga kale ee dowladeed, ee ku saabsan anshaxa internetka iyo waxyaabaha la aqbali karo, oo ay ku jiraan dhammaan sharciyada khuseeya gudbinta farsamada xogta laga dhoofiyey wadanka aad ku nooshahay, iyo siyaasad ama shuruudo kale.
Iyada oo ku saleysan xaddidaadaha lagu qeexay halkan, Dhinacyadu waxay ku heshiiyeen inay difaacaan, magdhaw siiyaan, oo ay is haystaan ​​midba midka kale oo aan waxyeello lahayn, oo ay ku jiraan hoosaadyadeeda iyo la-hawlgalayaasheeda, agaasimayaashooda, saraakiishooda, shaqaalahooda ama wakiilladooda, iyo wakiillada kale, kana soo horjeedda dhammaan sheegashooyinka, khasaaraha, waxyeellooyinka, deymaha, iyo kharashyada (oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn kharashyada qareennada ee macquulka ah iyo kharashaadka maxkamadda), ee ka soo baxa, la xiriira ama la xiriira:
ku xadgudub maadi ah oo Shuruudahan ah, ama heshiis kasta oo dhexmara Dhinacyada, ama
eedeyn kasta oo ah in macluumaad kasta ama walxo (oo ay ku jiraan wax kasta oo ka mid ah) ay ku xadgudbayaan xuquuq kasta oo dhinac saddexaad ah.
Waad fahantay oo aad ogolaatay in, adoo adeegsanaya Wax soo saarka iyo / ama Adeegyada, aad adigu kaliya mas'uul ka tahay wixii xog ah, oo ay ku jiraan macluumaadka shaqsiyadeed ee la aqoonsan karo, ee la ururiyey ama looga baaraandegay Agabkeenna iyo / ama Adeegyadeena. Waad difaaci doontaa, magdhow siin doontaa, oo aad qaban doontaa Milyan Sameeyayaal aan waxyeello lahayn, iyada oo aan xad lahayn, dhammaan waxyeelada la xiriirta (eedaynta) ku xadgudubka sharciyada asturnaanta iyada oo loo marayo isticmaalka Badeecadaha iyo / ama Adeegyada hoos imanaya koontadaada.
Dhinac kastaa waa inuu qaadaa caymis ku filan si uu u daboolo halista halkan ku jirta, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn caymiska guud iyo / ama mas'uuliyadda wax soo saarka. Marka laga hadlayo amniga, qarsoodiga iyo sharafta xogta, qolo kasta waxay mas'uul ka tahay inay ilaaliso tillaabooyinka farsamo iyo abaabul ee ku habboon ilaalinta xogta lagu farsameeyay nidaamyadooda iyo nidaamyada dhinac saddexaad oo ay adeegsanayaan dhinacyada ay khusayso.
Milyan Sameeyayaashu mas'uul kama noqon doonaan dib u dhac kasta oo ku yimaada fulinta ama ku guuldareysiga inay fuliyaan mid ka mid ah waajibaadka ay kugu hayaan ee ay keeneen dhacdooyinka ka baxsan awooddeeda macquul ah.
Milyan Sameeyayaasha ayaa si dhakhso ah kuugu soo sheegi doona adiga oo qoraal ah sababaha dib u dhaca ama joogsiga (iyo muddada ay u badan tahay) waxayna qaadi doonaan dhammaan tallaabooyinka macquulka ah si looga gudbo dib u dhaca ama joogsiga.
Luuqada heshiisiintu waxay noqonaysaa Ingiriis. Abaal marin kasta, xukun ama heshiis lagu soo saaray dhexdhexaadinta noocan oo kale ah waxaa geli kara dhinac kasta si loogu fuliyo amar maxkamad kasta oo awood u leh.
Haddii qayb ka mid ah Shuruudahaan loo haysto mid aan ansax ahayn ama aan la fulin karin, qaybtaas waxaa loo qaabeyn doonaa inay ka tarjumeyso ujeeddadii asalka ahayd ee Xisbiyada, qeybaha harayna waxay ku sii jiri doonaan xoog iyo dhaqan buuxa. Ka dhaafitaan dhinac kasta oo ka mid ah xilli kasta ama xaalad ka mid ah Shuruudahaan ama jebin kasta oo ka mid ah, mid kastoo ka mid ah tusaale ahaan, kama dhaafi doono muddadaas ama xaaladdaas ama jebinta ku xigta. Waxaad kaliya ku wareejin kartaa xuquuqdaada Shuruudahaan dhinac kasta oo ogolaada, oo ogolaada in laguu raaco, shuruudaha halkan ku qoran. Milyan Sameeyayaashu waxay ku wareejin karaan xuquuqdooda Shuruudahan iyada oo kaligeed ikhtiyaar u ah. Shuruudahaan ayaa ku xirnaan doona isla markaana faa iido u leh faa'iidada dhinacyada, ku xigeenadooda iyo xilalka la ogol yahay. Waxaad ku raacsan tahay in wax wada jir ah, shuraako, shaqo, ama xiriir wakaaleed uusan ka dhexeyn adiga iyo annaga taas oo ka dhalatay Shuruudaha, ama isticmaalkaaga Websaydhka, Alaabada, iyo / ama Adeegyada.
Xusuusin Gaara oo Ku Saabsan Caruurta
Websaydhka looma qorsheynin ama looguma talagalin inay isticmaalaan carruurta da'doodu ka yar tahay 16 sano, alaabtayada iyo Adeegyadeena waxaa laga yaabaa inaysan iibsan karin carruurta da'doodu ka yar tahay 16 sano. Uma aan si ula kac ah uga soo ururinno macluumaadka shakhsiyeed booqdayaasha da'doodu ka yar tahay 16 sano. Haddii aad ka yar tahay 16 sano, laguuma oggola inaad noo soo gudbiso macluumaad shakhsi ah. Haddii aad ka yar tahay da'da 16, waa inaad isticmaashaa Websaydhka oo keliya ogolaanshaha waalid ama ilaaliye.